Azuqua: Bvisa maSilos ako uye Batanidza Cloud uye SaaS Zvishandiso | Martech Zone
Azuqua: Bvisa maSilos ako uye Batanidza Cloud uye SaaS Zvishandiso
Muvhuro, Mbudzi 23, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Matt Shanahan
Kate Legett, VP uye muongorori mukuru kuForrester mune yaSeptember 2015 blog post yakanyorwa mune yake posvo, CRM iri Kupatsanura. Ndiyo Nyaya Inopokana:
Chengetedza ruzivo rwevatengi kumberi nepakati pekambani yako. Ita shuwa kuti urikutsigira vatengi vako kuburikidza kwavo kumagumo kusvika kumagumo rwendo neyakareruka, inoshanda, inonakidza kubatanidzwa, kunyangwe kana rwendo rwevatengi ruchidarika tekinoroji mapuratifomu.
Kupatsanurwa kweCRM kunogadzira marwadzo anopaza kune ruzivo rwevatengi. A 2015 Cloud Report na Netskope inotaura kuti avhareji bhizinesi inoshandisa anopfuura zana maapplication pakushambadzira uye CRM. Ipo SaaS maapps achityaira zvakanyanya kushanda, iwo zvakare anogadzira zvakaoma kune vashandisi vebhizinesi - sekubatanidza uye kuongorora data revatengi. Semuyenzaniso, eConsultancy akawana izvozvo kufambisa data pakati pesisitimu (74%) iri pakati pematambudziko ekushambadza anorwadza, uye Bluewolf akawana izvozvo 70% yevashandisi veSalesforce vanofanirwa kuisa iyo imwechete data mumasisitimu mazhinji.
Azuqua iri kubatsira mabhizinesi kugadzirisa aya 'marwadzo mumaapps avo' nekupa simba vashandisi vebhizinesi kubatanidza gore uye SaaS kunyorera mukati meminiti imwe, kusanganisira mhinduro nyowani inonzi Azuqua yeKubudirira kweVatengi. Yakagadzirirwa kubvisa siloes akagadzirwa neakasiyana CRM, kushambadzira otomatiki, sevhisi uye rutsigiro kunyorera, Azuqua yeMutengi Kubudirira inobvumidza vashandisi vebhizinesi kusanganisa data, kushandura bhizinesi-yakakosha mafashama ekufambisa uye kutora kutonga kweiyo vatengi ruzivo. Azuqua yeKubudirira kweVatengi inowanikwa kutanga ne $ 250 pamwedzi.
Azuqua yeKubudirira kweVatengi inowana CRM yedu, rutsigiro uye mapurojekiti manejimendi maapplication anoshanda pamwechete kuti vabvise manyorerwo ekupinda kwedhata. Ne automating dhata kuyerera, edu ekutengesa, rutsigiro uye mutengi budiriro zvikwata zvinokwanisa kushanda pamwechete kugadzira yepamusoro mutengi ruzivo. Thomas Enochs, VP yeKubudirira kweVatengi kuChef
Azuqua yeMutengi Kubudirira maficha anopfuura makumi mana ekunyorera kubatanidzwa, kusanganisira FullContact, Gainight, Marketo, Salesforce, Workfront uye Zendesk, uye gumi nemashanu chinangwa-chakavakirwa mafashama. Padanho rega rega murwendo rwevatengi, Azuqua inoita kuti vashandisi vebhizinesi vabatanidze avo SaaS kunyorera, shandura bhizinesi-yakakosha mafirifomu ekufambisa, uye tora kutonga kweiyo ruzivo rwevatengi.
Mushini wakakora mutengi wakabudirira unoda kuti maapplication ako ashande mu tandem kuti vawane data rakaenzana ipapo ipapo rinogovaniswa pane zvese zvinogoneka zvevatengi zvekubata-mapoinzi. Kukosheswa uye nenguva zvinhu zvine basa, saka kana mapurogiramu akabviswa akabaya kunonoka uye zvikanganiso, izvo zvinoshandura mukurasika kwemari. Mhinduro yedu inoderedza marwadzo ako nekuona kuti data kubva kumaaccount nemaaccounts anoenderana mune ese maapp, zviyeuchidzo zvevashandisi uye zviyeuchidzo zviri panguva yakakodzera, uye zvinopihwa ruoko ndezvechokwadi. Nikhil Hasija, CEO uye co-muvambi kuAzuqua
Azuqua yeMutengi Kubudirira workflows inosanganisira:
Rwendo rwevatengi: kutora uye kurekodha mutero wekubudirira kwevatengi uye kusarudzika kubva mukuitwa, kukwira boarding, kudzidziswa, uye kubvunza.
Bata kuunganidzwa: centralize account uye yekutaurisa data kune ese masisitimu ekubata kubva kutsigiro kuenda kushambadziro kunharaunda dzepamhepo
Kufumiswa: batanidza nevekunze vatengi budiriro dhata sosi senge FullContact kuti uwedzere otomatiki dhata kuaccount uye marekodhi ekutaurirana
Communications: tarisa kune akakosha ekubudirira kwevatengi zviitiko kana zviito uye tumira zviyeuchidzo mune yepedyo-chaiyo nguva kuburikidza neemail, zvinyorwa, kana kutumira mameseji.
Dhata orchestration: ita shuwa kuti nyowani kana yakagadziriswa account uye data rekutaurirana rakagadziriswa mukutsigira, kubvunza, kudzidzisa, kushambadzira, nharaunda, uye zvimwe zvinoshandiswa.
Maitiro orchestration: chengeta mabasa uye nenyaya up-to-date pane ese maapplication.
Saina kuti utore Mahara Muedzo weAzuqua
Kuti uwane mamwe mashoko, shanya Azuqua.
Tags: azuquabhuruuCRMDatadata silosforresterYakazaraContactkuonaKate Legettdata rekushambadzirakushambadzira data kuwiriranisakushambadzira kusanganamarketoNikhil HasijasalesforceThomas EnochsKubasazendesk
Matt Shanahan ndi CMO pa Azuqua, kambani inobatsira mabhizinesi kugadzirisa mashandiro ebasa pakati peSawaS zvinoshandiswa, zvinosanganisira zvemagariro, email, kushambadzira otomatiki kana CRM masystem akakosha pakubudirira kwevatengi. Matt ane angangoita makore makumi matatu ezviitiko muindasitiri yehunyanzvi, kubva kuAccenture kusvika kutanga. Iye anoratidzirwa muzvinabhizimusi seVP yekushambadzira kwechigadzirwa uye manejimendi eDocumentum kubva pakutanga kuburikidza nekutanga kupa veruzhinji uye nguva pfupi yadarika semubatanidzwa uye SVP yezano reScout Analytics.
Mbudzi 25, 2015 na4: 55 PM
Ichi chiitiko chinonakidza kwazvo. Ini ndinofungidzira iwe waisa kuyedza kwakawanda kugadzira iyi posvo uye zvinobatsira kwazvo kwandiri uye nevamwe ma blogger futi. Kutenda nekugovana yakanakisa post.